Kitra – « Champions League » any Eoropa: montsan’ny Real de Madrid 3 no ho 1 ny Liverpool | NewsMada
Kitra – « Champions League » any Eoropa: montsan’ny Real de Madrid 3 no ho 1 ny Liverpool
Mazava ny nandresen’ny Real de Madrid ny Liverpool, afakomaly, eo amin’ny ampahefa-dalana, fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, “Champions League”, any Eoropa. Nomontsanin’izy ireo tamin’ny isa 3 no ho 1 ny ekipa anglisy.
Anisan’ny nisongadina tamin’ny lalao natao, afakaomaly, ary nampiditra ireo baolina roa ho an’ny ekipa espaniola i Vinícius Júnior, vao 20 taona (minitra faha- 27 sy sy 65).’ Sambany ho an’ity tanora vao herotrerony ity ny nampiditra baolina roa tamin’ny lalao natrehiny. Manampy izany koa ny nampidirin’i Asensio (minitra faha-36)’ ny baolina fahatelo. Na izany aza anefa, nahafaty ny baolina tokana ho an’ny Liverpool ilay mpilalaon’ny Faraonan’i Ejypta, i Mohamed Salah, minitra faha-51. Baolina tokana nampidiriny tamin’ireo lalao efatra nataon’ny ekipany io.
Niaiky ny mpanazatra i Jurgen Klopp fa tsy tafiditra anaty lalao ny ekipany tamin’ny fizaram-potoana voalohany. “Nanary baolina fahatany ireo mpilalao”, hoy izy.
Resin’ny Man City ny Dortmund
Nampanantena hanarina ny lesoka izy ireo amin’ny lalao miverina. Tsy nihambahamba kosa ny mpanazatra ny Real, i Zinedine Zidane, fa tsara fanombohana tamin’ny lalao ary efa notilin’izy ireo sy narahiny akaiky ny fomba filalaon’ny Liverpool ka hain’izy ireo ny nifehy izany. “Izahay rahateo, mafy sy tsara taty amin’ny vodilaharana”, hoy izy.
Etsy andaniny, lalao iray amin’ny ampahefa-dalana koa ny nandresen’ny ekipa anglisy, Manchester City, 2 no ho 1 an’ny Borussia Dortmund. Nahafaty ireo baolina roa ireo i Kevin De Bruyne sy i Phil Foden raha i Reus kosa ny nampiditra ny baolina tokana ho an’ny ekipan-dry Rainiboto.
Tsiahivina fa hotanterahina ny 14 avrily izao indray ny lalao miverina amin’izao ampahefa-dalan’ny “Champions League” any Eoropa izao.